Fampiasana Tambajotran-tserasera Mitera-doza raha tsy voafehy
Fitobahan’ny entana avy any ivelany Mamono ny orinasa Malagasy
Betsaka ny orinasa avy any ivelany amin’izao fotoana no miezaka mitrandraka ny tsena aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana hanondranana ny entan’izy ireo.
Haren’i Madagasikara Mendrika hahafantatra izany ny rehetra
Omaly alatsinainy 12 novambra no nandraisan’ny Groupe Axian sy ny Fondation H tetsy amin’ny foiben-toerany Andraharo ireo tanora maherin’ny 80 avy amin’ny toerana tsizarizary.
Ampahan`ny voka-dratsy ateraky ny tambajotran-tseratsera sosialy “Facebook” ireo. Hitantsika taloha fa ny zavatra nisy tamin`ireny tambajotra sosialy ireny matetika dia mikasika ny fidirana amin`ny fiainan’olona manokana. Efa tsy zoviana eto amintsika intsony ny fampiasana ny tambajotra sosialy izay mety mitera-doza. Na eo aza ny fivoarana dia mila lanjalanajaina ihany ny zavatra atao ary hajaina ihany koa ny fahafahan’ny hafa.